Efa afa-mampiasa ny Google Translate ianao ankehitriny handikana ny lahatsoratra ao amin’ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2019 5:19 GMT
Iray amin'ny fiteny ho zakain'ny Google Translate ny Zulu, izay tsy zakan'ny milina fandikanteny tao amin'ny fandikana votoaty teo aloha. Manana mpiteny 12 tapitrisa ny Zulu ary 1100 monja ny lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia. Lahatsoratra avy amin'ny Wikipedia teny anglisy amin'ny kintana manandrambon'i Halley ao amin'ny Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Nosoratan'i Runa Bhattacharjee sy Pau Giner ity lahatsoratra ity. Nivoaka voalohany tao amin'ny bilaogy Wikimedia ary nivoaka eto indray araka ny lisansa CC BY-SA 3.0.
Ny fanadihadiana no manombana fa mihoatra ny 7.000 ny fiteny iresahana manerana izao tontolo izao. Misy ny Wikipedia amin'ny 300 amin'izy ireo. Izany hoe tokotokony ho 4 isanjaton'ny fiteny manerana izao tontolo izao mandrakitra ny sasany amin'ny fahalalàn'izao tontolo izao.
Hevero ny fiteny arabo. Mihoatra ny 420 tapitrisa ny mpiteny azy, iray amin'ny fiteny be mpampiasa indrindra eto ambonin'ny tany izy. Nefa ny 3 isanjato monja amin'ny votoaty an'aterineto no vonona amin'ny teny arabo. Na hevero ihany koa ny Zulu, manana mpiteny 12 tapitrisa—saingy 1100 monja ny lahatsoratra amin'io fiteny io ao amin'ny Wikipedia.
Efa nampiasàna handikàna lahatsoratra efa ho 400.000 ao amin'ny Wikipedia ny fitaovam-pandikam-botoatinay. Mitarika ny milim-pandikanteny izahay hahazaka ny mpanitsy amin'ny famokarana fandikana lahatsoratra iray izay azon-dry zareo jerena indray, hahitsy ary hatsaraina. Faly izahay amin'izao 9 Janoary 2019 izao hanambara fa azon'ny mpanitsy ampiasaina rehefa mandika lahatsoratra amin'ny alalan'ny milina fandikam-botoaty ny iray amin'ny fitaovana fandikan-teny misy ankehitriny ka lasa lavitra indrindra amin'izany, dia tsy inona fa ny Google Translate.
Efa ela dia ela no nangatahan'ny vondrom-piarahamonina volontera mpanitsy lahatsoratra ny Google Translate ho fitaovana fandikanteny ao amin'ny Wikipedia. Afa-misafidy avy amin'ny rafi-milina fandikanteny maro hahazaka fandikana lahatsoratra iray ny mpanitsy, efa iray amin'ny azo isafidianana ankehitriny ny Google Translate. Amin'ny fampidirana ny Google Translate ho iray amin'ny rafi-milina fandikanteny, dia ahazaka fiteny 15 fanampiny ankehitriny ny fitaovana fandikana votoaty, ka tafiditra amin'izany ny Hausa, Kiorda (Kurmanji), Yoruba, ary Zulu. Amin'izao fotoana izao ny fitaovana fandikanteny manamora ny fandikana fiteny mitotaly 121.
Raha manam-panontaniana ianao amin'ity fitaovam-piasana vaovao ity sy ny fomba fiasany, dia azonao atao ihany koa ny manopy maso ao amin'ny FAQ ao amin'ny MediaWiki.org sy mamoaka izay fanontanianao ao amin'ny talk page.
Aza miala hanarahanao ny fanavaozam-baovao hafa momba ny fitaovana fandikam-botoaty sy ny asan'ny ekipan'ny Fiteny ao amin'ny Orina Mpanasoa Wikimedia hamelarana ny fanohanana fiteny amin'ny fahalalàna rehetra an'izao tontolo izao ao amin'ny fiteny rehetra amin'izao tontolo izao.